Razanajatovo Gildas André: namolavola tompondaka eran-tany maro, teo amin’ny taranja kick boxing | NewsMada
Razanajatovo Gildas André: namolavola tompondaka eran-tany maro, teo amin’ny taranja kick boxing
Maitre Gildas, fantatry ny maro teo amin’ny taranja kick boxing ary efa mampiaraka izany amin’ny taranja Muay Thai, amin’izao fotoana izao. Razanajatovo Gildas André ny tena anarany ary nanomboka niditra tamin’ity taranja ity izy ny taona 1992, izany hoe, 29 taona izao no niangaliany ny kick boxing. Nikoizana tamin’ny fanomezana fanazarana ny atleta Malagasy ny Maitre Gildas, ka mpikatroka maro no novolavolainy ary nahazo ny tompondaka eran-tany sy tompondaka lefitra ny ankamaroany. Isan’izany i Evah, tompondaka lefitra eran-tany, taranja Muay thai, i Stephan sy i Richard, tompondaka eran-tany, kick boxing, i Lava kely sy i Faratiana izay samy tompondaka eran-tany ihany koa, i Fazaraly, tompondaka lefitra eran-tany “Pro” ary i Severin, tompondaka eran-tany “Pro”. Tsy ambaka izany koa ny teo amin’ny sehatra afrikanina.
Mpikatroka mavitrika ihany koa
Tsy ny teo amin’ny lafiny fanazarana ny atleta ihany, ny nahafantarana an-dRazanajatovo Gildas André, fa isan’ny mpikatroka mavitrika izy na teto Madagasikara izany na tany ivelany. Nandrombaka ny tompondaka nasionaly voalohany izy, ny taona 1995 ary efa nahazo ny anaram-boninahitra, teo anivon’ny ranomasimbe Indiana ihany koa, ankoatra ireo fifaninanana iraisam-pirenena betsaka efa natrehany. Isan’ny fahatsiarovana tsara ho an’ny Maitre Gildas, ny fahafahana nahita firenena maro ary tena nahaizany sy nahalalany zavatra betsaka ny nifaneraserana tamin’ny olona eran’izao tontolo izao. Tsiahivina, tafiditra tao anatin’ny ekipam-pirenena Malagasy, taranja kick boxing, Razanajatovo Gildas André, ny taona 1997, nanana ny toerana teo anivon’ny federasiona kosa izy ny taona 2003 rehefa tsy nanao fifaninanana intsony. Efa nitàna ny andraikitra Tale teknina nasionaly lefitra ihany koa izy, hatramin’ny taona 2017. Nanomboka nifantoka tamin’ny fanazarana ireo mpikatroka ny taranja kick boxing sy Muay Thai, Maitre Gildas, nanomboka teo ary mitazona ny klioba GISL izy ankehitriny.
Fahatsiarovana ratsy ho azy ny tamin’ny 1997 sy 2006
Fatsiarovana ratsy ho an-dRazanajatovo Gildas André, ny tsy nahafahana niatrika ny fiadiana ny tompondaka eran-tany ny kick boxing, tany Prage, ny taona 1997. “Saika handeha ho an’ny Prage izahay ny taona 1997, saingy tsy lasa noho tsy fisian’ny saran-dalana, efa nanomana mafy nandritra ny telo volana anefa tamin’izany”, araka ny fitantaran’ny Maitre Gildas. Teo ihany koa ny tamin’ny 2006, “tsy nosoniavin’ny federasiona ny taratasy fifanarahana handeha any Frantsa hiatrika fiofanana kanefa ny asako teto an-toerana efa najanona”, hoy hatrany ny fitantarany. Hafatra ho an’ny fanjakana, hoy ny Maitre Gildas, ny hijerena akaiky ireo atleta mitondra avo ny voninahi-pirenena satria betsaka ny zava-bitan’izy ireny.
Mbola miangaly ny taranja Muay Thai sy Kick Boxing ny Maitre Gildas
Faniriany hatramin’ny fahakeliny ny ho lasa lavitra amin’ity taranja ity ary tanjony mandraka ankehitriny ny hampandroso ny Muay Thai sy ny kick boxing eto Madagasikara. Nambarany fa tena mbola miangaly ity taranja ankafiziny ity, na dia efa miha mandroso aza ny taona. “Mamporisika ny rehetra mba hanao sport izay manandrify anao fa mahasoa sy mahasalama ny sport ary afaka hivelomana ihany koa”, araka ny nohamafisin’ny Maitra Gildas.